पोखरामा ‘पानी माथिको ओभानो’ बनिन् मलिना ! – BIG FM 101.2 MHz
Home » मनोरञ्जन » पोखरामा ‘पानी माथिको ओभानो’ बनिन् मलिना !
पोखरा, २९ जेठ । पूर्व मिस नेपाल तथा अभिनेत्री मलिना जोशीले अभिनय गरेको फिल्म हिट भएको शायदै होलान् । ऋतु देखि पछिल्लोपटक रानीसम्म आउँदा उनले अभिनय गरेका हरेक फिल्म व्यवसायिक हिसाबले घाटामै छन् ।
मंगलबार पोखरामा जोशीले उनको करिअरसँग जोडिएको यहि विषयलाई उठाए । फिल्म ‘तिमी हुन्छौ जहाँ जहाँ’को प्रचारप्रसारको क्रममा पोखरा आइपुगेकी मलिनालाई पत्रकारहरुले सोधे–‘तपाईले अभिनय गरेका फिल्महरु किन व्यवसायिक हिसाबले राम्रो नभएको होलान ? के तपाईले राम्रो फिल्म छान्न नजानेको हो ?’
पत्रकारको यस्तो प्रश्न आएपछि उनी रन्थनिईन् । र, भनिन्, ‘यसमा मेरो दोष छैन । फिल्म शुरु हुनभन्दा अगाडि निर्माता निर्देशकहरुले यति राम्रो कथा सुनाउनुहुन्छ, अनि मलाई लाग्छ फिल्म स्योर हिट हुन्छ । तर फिल्म प्रदर्शनमा आउँदा सुनेको भन्दा फरक भैदिन्छ ।’ उनले यसो भनिरहँदा फिल्म फ्लप हुनुमा आफ्नो कुनै हात नहुने कुरा जोडिन् । ‘फिल्म फ्लप हुनुमा मेरो के दोष ? मैले त आफ्नो राम्रो गरिरहेकै त छु ।’
मलिना जोशी अभिनेत्री मात्र नभई पूर्व मिस नेपाल पनि हुन् । र, मिस नेपाल भएकै हिसाबले दर्शक अनि मिडियाले उनीबाट अपेक्षा पनि सामान्य युवतीभन्दा बढि नै गर्छ । त्यसैले उनलाई मिडियाले यस्ता प्रश्न तेर्साएका थिए । तर उनी निर्माता र निर्देशकलाई दोष थोपर्दै आफू चाँहि पानी माथिको ओभानो बनिन् ।
यीनै मलिनाले अभिनय गरेको पछिल्लो फिल्म ‘तिमी हुन्छौ जहाँ जहाँ’ आगामी असार ८ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । उनीसँगै यो फिल्ममा मनिष सुन्दर श्रेष्ठ, तमन्ना के.सी, स्वरुप ढकाल धिरज सुनार लगायतले अभिनय गरेका छन् । बिकास बस्यालले निर्देशक हुन् भने डालचन्द्र दवाडी, प्रकाश बाँस्कोटा, मदन दवाडी र हरिप्रसाद अधिकारी फिल्मका निर्माता हुन भने विना कार्की सहनिर्मात्री हुन् ।
पोखराबाट देशव्यापी प्रचार अभियान थालनी गरेको फिल्म यूनिट बुटवल, नारायणघाट, हेटौँडा, विराटनागर, ईटहरी हुँदै काठमाण्डौ फर्कने सेड्युल छ ।